ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်း လင်းနို့များတွင်တွေ့ရှိထား ….
တကမ္ဘာလုံး တခြားဘယ်နေရာမှာမှ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်းလင်းနို့တွေဆီမှာ တွေ့ထားတယ်လို့ စမစ်ဆိုးနီးယန်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဇီဝဗေဒဌာန ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်မှာ
အလုပ်လုပ်နေတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကု ဆရာဝန် မာ့ခ်ဗာလစ်တီတိုကို ကိုးကားပြီး ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်မှာ ရေးပါတယ်။
ဗာလစ်တီတိုဟာ တိရစ္ဆာန်ကနေ လူကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို အထူးပြု လေ့လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ လင်းနို့တွေဆီက သွားရေနဲ့ မစင်နမူနာတွေကိုတင် စစ်တမ်းကောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်လောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို နားလည်ဖို့ ဒေသတွင်း လူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေကိုပါ လေ့လာခဲ့တာပါ။
တချို့ ဒေသခံတွေကလည်း တောကောင်သား ဈေးကွက်ထဲမှာ လင်းနို့တွေကို စားတာရောင်းတာ ရှိနေတယ်လို့ ဗာလစ်တီတိုက ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပျားလင်းနို့လို့ခေါ်တဲ့ ဟမ်ဘယ်ဘီး လင်းနို့မျိုးစိတ်ထဲက လင်းနို့ကောင်ရေ တထောင်ကျော်ကနေ နမူနာ တသောင်းကျော် ကောက်ယူစုဆောင်း စမ်းသပ်ထားခဲ့တယ်။
စမ်းသပ်ချက်အရ ကမ္ဘာပေါ် ဘယ်နေရာမှာမှ မတွေ့သေးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရှိနေတယ်လို့ စစ်တမ်းက ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်သစ်ဟာ လူသားတွေအတွက် ဆိုးရွားတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိမယ်မထင်ဘူးလို့ စမစ်ဆိုးနီးယန်းတက္ကသိုလ် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဆူဇန်မာရေးက ပြောပါတယ်။
အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိသေးပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ ကျမတို့မှာ သတင်းအချက်အလက် ရှိထားပြီးပြီလို့ သူက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ အသစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို လေ့လာတဲ့ အမေရိကန် အေဂျင်စီ PREDICT ဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ကျော်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ငါးခု ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အေဂျင်စီပါ။
စမစ်ဆိုးနီးယန်း တက္ကသိုလ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပရောဂျက်ဟာ ဒီအေဂျင်စီက လုပ်နေတဲ့ အားထုတ်မှု အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်က စတင်ခဲ့တဲ့ ပရောဂျက် ဟာ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာမှာ အဆုံးသတ်ခဲ့တာပါ။
ပရစ်ဒစ် အဖွဲ့ဝင် အသင်းတွေဟာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်အတွင်း ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားပေါင်း ၁၆၀ အပါအဝင် နို့တိုက်သတ္တဝါတွေကို ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်သစ် ၁၂၀၀ကျော်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့လည်း မာရေးက ပြောပါတယ်။
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်က ရာသီဥတုပူတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ဟုတ်လို့လား?
မင်းပြားတွင် လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်၍ အမျိုးသမီး ၁ ဦးသေဆုံး၊ ကလေး ၂ ဦးဒဏ်ရာရ
ဘုရားဖူးပြန်လာတဲ့ ညီအကို နှစ်ဦးကို လူငယ်သုံးဦးမှ ရိုက်နှက်လုယက်၊ ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရ
ဦးတီခွန်မြတ် (သို့မဟုတ်) မြန်မာပြည်ရဲ့ ပြည်သူ့တရားရှင်ပေါင်ချိန်